YBS ကားတစ်စီးကြောင့် အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ မောင်နှမ နှစ်ဦးရဲ့ ဈာပန - BBC News မြန်မာ - Download Facebook Videos
YBS ကားတစ်စီးကြောင့် အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ မောင်နှမ နှစ်ဦးရဲ့ ဈာပန - BBC News မြန်မာ
လမ်းပြောင်းပြန် မောင်းတဲ့ YBS ယာဉ်မောင်းကြောင့် အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မောင်နှမ နှစ်ဦးရဲ့ ဈာပန
ရိုက်ကူး - ရွှေအင်းသား ခင်မောင်ဝင်း
Sai Sis Thway 1 year ago
တာ၀န်ယူမှု တာ၀န်ခံမှု လုံး၀မရှိတဲ့ YRTA
Ko Ko Naing 1 year ago
YBS ကတာဝန္​ရိွသူ​ေတြမ​ေတြ႔ရပါလား yrta yuta. တို႔က​ေရာ ဘာတာဝန္​ယူၾကမွာလည္​း ​ေစာင္​့ၾကည္​့ၾကတာ​ေပါ့ တာဝန္​အရိွဆုံး YRTA ဥကၠဌ ဘယ္​​ေပ်ာက္​​ေနတာလည္​း
Aung Hlaing 1 year ago
ဒီလိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ အောက်တန်းစား YBS ဒရိုင်ဘာရဲ့ မျက်နှာဓာတ်ပုံကို မီဒီယာတွေက ဘာ့ကြောင့် မဖော်ပြနိုင်တာလဲ.....နားမလည်ပါ....
Thaint Thaintnge 1 year ago
မဆင်မခြင်မောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် ခုတော့ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။
Phyu Winnaing 1 year ago
ေနာက္ ေနာင္ ဒီ အျဖစ္မ်ဳိး
Nyunt Kyaw 1 year ago
အင္း .. ေခါင္းကိုင္ဖခင္ႀကီးလည္း သူ႔ဇာတ္သူမႏိုင္ . အတြင္းကအရႈပ္ထုတ္ ႀကီးကလည္း ၾကာေလ ရွင္းမရေလျဖစ္လာ .. အေပၚက ေအာက္ကိုမၾကည့္အား မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ လုပ္ေလ .. ေအာက္ေျခမွာက ျဖစ္ခ်င္းတိုင္းျဖစ္ .. ေနာက္ဆံုး ဘယ္သူမွ ရဲရဲဝင့္ဝင့္တာဝန္မခံၾက။ လုပ္ၾကပါ .. ျပည္သူေတြက စိတ္ဆိုးတာထက္ စိတိနာသြားရင္ ၾကံ့ဖြတ္လမ္းအတိုင္းသြားရဖို႔ နီးလာပါၿပီ။
Warsoe Phwar 1 year ago
မိခင်ဖြစ်သူရင်ထဲတော့ ဘယ်လောက်ထိများ ခံစားနေရမှာလဲ။ဒီည ကိုရော ဘယ်လို အိပ်ပျော်အောင် အိပ်မှာလဲ။
Nan Snow Oo 1 year ago
ယာဥ်မောင်းတိုင်း လမ်းစည်းကမ်း ယာဥ်စည်းကမ်းလိုက်နာတတ်ဖို့လိုတယ် ဖြစ်ပြီးမှ တာဝန်ယူတာထက် မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ရမှာ
ပြောတော့ ဘရိတ် ဘယ်နှချက်နင်းလဲ ကအစ သိတယ်နဲ့ ဖြစ်လာတော့ တောင်းပန်တာလည်းမတွေ့ရဘူး သားရောသမီးရော ဆုံးရှုံးရတဲ့ မိဘရင်ထဲကိုယ်ချင်းစာတယ်
Kaunghtet Paingsoe 1 year ago
စည်းကမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ထည့်မပြောကြစမ်းနဲ့ အရင်ကလည်းမရှိဘူး အခုလည်းမရှိဘူး မရှိလို့မသိတယ်ပြောအုန်းမလား ကျောင်းနံရံတွေမှာ စိတ်ဓာတ် စည်းကမ်း ပညာ ဆိုတာရေးထားတယ် ကျောင်းမှာပဲထားခဲ့ကြလေသလား မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြောလို့ထူးမယ်ဆိုရင် ပြောစရာတွေတောင်မကုန်ဘူး ဒီကိတ်စ YBS က ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ် ပွင့်လင်းမြင်သာအောင် တာဝန်ယူပေးပါ
Ellyn Kyaw 1 year ago
ငါ့သမီးလေးဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲတဲ့ အမေဖြစ်သူက သွားလေသူသမီးလေးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကြည့်ချင်ရှာတာ..ကြည့်ခွင့်ပေးရက်ကြပါ့မလား..မနက်က တက်လာတဲ့ သတင်းvideo တခုထဲမှာ ခေါင်းကြေနေတဲ့ ကောင်မလေးကိုတွေ့ခဲ့မိတာ မကြည့်ရက်စရာပါ..အမေတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုကြည့်ရက်ပါ့မလဲတွေးရင်း မျက်ရည်တောင်ကျမိတယ်..
Thar Chaw Lay - ျမန္မာ ေခ်ာင္း႐ိုက္😋 ကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားတာ😋...
Thar Chaw Lay3years ago • 42.5K views
Josh Talk2years ago • 1.5M views
ပဲခူးဆား - ျခံခုန္​တဲ့ႏြားနဲ႔ စႏိႈက္​​ေၾကာ္​တဲ့...
ပဲခူးဆား3years ago • 588.6K views
လိုးကားမ်ား - hi
လိုးကားမ်ား2years ago •0views
Kyaw Swar Win - " အေမႊစိန္ " ကာတြန္း ✍
Kyaw Swar Win 11 months ago • 26.4K views
ၿမိဳ ႔ေရႊမန္းသားဖိုးခ်စ္တို႕ကတဲ႕ဇာတ္အလွသဘင္ 12 months ago • 2.3M views
😍အေမႊစိန္😍... - ရွှေမြခိုင် Online Shop - Mdy
ရွှေမြခိုင် Online Shop - Mdy 10 months ago • 58.8K views
Jav - Sex Full (178)
Video sexy full HD4days ago • 10K views
Jav - Sex Full (204)
Flim jav full HD4days ago • 3.8K views
Fanáticos del Cine3years ago • 9K views
Jurassic World: El Reino Caído | Carnotaurus
Universal Pictures3years ago • 12.7K views
Universal Pictures4years ago • 312 views